Uluhlu lokuHlola olungenayo: Iindlela ezingama-21 zoKhula | Martech Zone
Njengoko unokucinga, sifumana uninzi lwezicelo zokupapasha ii-infographics Martech Zone. Kungenxa yoko le nto sabelana nge-infographics veki nganye. Sikwazityeshela izicelo xa sifumana i-infographics ebonisa nje ukuba inkampani ayenzanga mali inkulu yokwakha ixabiso lexabiso. Xa ndicofa le infographic ivela kuBrian Downard, uMququzeleli we Amacebo oshishino e-ELIV8, Ndibaqondile kuba sabelane ngomnye umsebenzi abawenzileyo.
Le infographic; Nangona kunjalo, akukho nto imfutshane yokugqibelela! UBrian kunye neqela lakhe bapapasha infographic entsha ekufezekiseni ukukhula kweshishini kunye nentengiso engenayo exabisekileyo, entle, kwaye ibonelela ngamanani esiseko sokubuyisela isicwangciso ngasinye. UBrian kunye neqela lakhe banikezela ngeenkonzo zokudibana kunye nezentengiso kuluhlu olunomdla lwabathengi beshishini.
Yintoni intengiso engenayo?
Ukuthengisa ngaphakathi sisicwangciso esisebenzisa umxholo ukutsala umdla wokuzibandakanya kunye nokuguqula kunye neenkampani ezikwi-Intanethi. Iinkampani zisebenzisa iibhloko, iipodcast, ividiyo, ii-eBooks, iincwadana, amaphepha amhlophe, uphando lwezinto eziphilayo, iimveliso zomzimba, ukuthengisa imidiya yoluntu, kunye nokunyusa okuhlawulelweyo ukufikelela kubaphulaphuli abafanelekileyo.
UBrian wahlanganisa le infographic ebonelela nge Uluhlu lokuthengisa olungena ngaphakathi Izicwangciso ezili-21 eziphambili zokuhambisa eziza kukhulisa ishishini lakho usebenzisa iindlela zorhwebo ezingenayo.
Khuphela uLuhlu lokuHlola lwamaNqaku angama-94
Indlela yokukhawulezisa ukukhula koShishino kunye nokuThengisa okungaphakathi
Yenza ixabiso ngeBlogging -Amashishini afumana ibhlog Iipesenti ezingama-77 ngaphezulu kwaye I-97% ngaphezulu amakhonkco kunaleyo ingenayo.
Sebenzisa iMidiya yoLuntu ukuqhuba iTrafikhi - 2.03 billion abasebenzisi beendaba zosasazo nika amashishini umjelo omtsha omangalisayo ukuqhuba ukugcwala kwaye fumana abathengi abatsha.
Sebenzisa i-SEO ukuze uFumaneke kwi-Intanethi - I-93% yamava akwi-Intanethi qala nge # injini yokukhangela. Xa ulungiselela ngokufanelekileyo indawo yakho kunye nomxholo weinjini yokukhangela, uya kuthi yonyusa amazinga akho kwaye fumana ezinye izithuthi.
Sebenzisa abanye abaphulaphuli -Amashishini abona a 6-to-1 ukubuya nini abanokufumana kunye nokubandakanya abaphulaphuli abafanelekileyo kwezinye iisayithi.
Yenza ukubuyela kwakhona kwi-PC kunye neeNtengiso ze-Intanethi Iindwendwe eziphinde zajongwa kwakhona 70% ngaphezulu ukuguqula kwiwebhusayithi yakho.
Ukujongwa ngokuthe ngqo kweTrafikhi ngeeCall-to-Action - I-70% yamashishini awunazo naziphi na iifowuni ezibonakalayo zokwenza izinto kwiphepha lasekhaya.
Yenza ixabiso ngeZibonelelo zoMxholo -I-Premium #content ivelisa Amaxesha ama-3 amaninzi akhokelayo njengentengiso yemveli ephumayo kunye indleko 62% ngaphantsi.
Guqula abatyeleli ngamaphepha okufika - I-56% yazo zonke iiwebhusayithi ezicofwayo zibhekiswe kwiphepha langaphakathi, hayi iphepha lasekhaya.
Sebenzisa iiFomu zokukhetha ukungena ukukhuthaza ukuguqulwa -Amashishini ane-opt-in #ifom zinakho yonyusa izinga lokuguqulwa nge-1000% okanye ngaphezulu!
Sebenzisa isiQinisekiso soLuntu ukuYenza ukuthembeka -Umthengi # uphononongo unakho Yandisa ukuthengisa ngokusebenza ngama-54% kuba I-88% yabantu bayathemba #ingxelo kwakhona Abanye abathengi kangangoko bethemba iingcebiso kubafowunelwa.
Sebenzisa uLwalamano lwaBathengi ukuKhangela ukuKhokela -ICRM inako yonyusa ingeniso ngama-41% kumntu ngamnye othengisayo xa isetyenziselwa ukulandela kunye nokondla izikhokelo.
Thumela ii-imeyile ukuvala ukuthengisa okungakumbi -Idola nganye eyi-1 echithwe kwintengiso ye-imeyile inembuyekezo ephakathi ye $44.25!
Cwangcisa ukuThengisa ngokuZenzekelayo - Ukuzenzekelayo khokela Inkqubo ivelisa a 10% okanye ukwanda okukhulu Kwingeniso kwiinyanga nje ezi-6-9.
Yenza umxholo ogxile ekuthengiseni - 61% yabantu kunokwenzeka ukuba uthenge kwinkampani ehambisa i- # umxholo.
Sebenzisa uhlalutyo lokufumana amajelo aphezulu - +I-50% yamashishini ukufumanisa kunzima uku umsebenzi wentengiso ngqo kwiziphumo zengeniso.
Yiba neNkxaso yoMthengi eyoyikekayo - 65% yabathengi bashiya ngaphezulu a Inkonzo yabathengi engalunganga ulwazi!
Yenza iiNkcazo kwiMidiya yoLuntu - 53% yabantu abalandela iimveliso kwimidiya yoluntu bathembeke ngakumbi kwezo brand.
Umvuzo Abathengi abathembekileyo - Ixabisa amaxesha 5 ngaphezulu ukufumana abathengi abatsha ngaphezu kokugcina ezikhoyo. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba wena zivuze abathengi bakho abathembekileyo ukuzigcina zibuya ngaphezulu.
Sebenzisa ubuNtu kuDibano lokuzibandakanya -Amashishini abona ukwanda kwe 20% kwintengiso ngamava akho kunye neengcebiso zoku nika abathengi umxholo kunye neemveliso abazifunayo.
Sebenzisa iSaveyi kunye nezixhobo zeNgxelo - Ithath ababini Amava ali-12 amahle abathengi ukwenza kuphela 1 engalunganga amava. Ukuqokelela ingxelo kuya kunceda susa ithuba yamava abathengi ababi.
Qokelela uPhononongo kunye noBungqina - Izifundo zibonisa oko70% yabathengi jonga kwimveliso # ukuhlaziywa kwakhona ngaphambi kokuthenga. Ukucela abathengi ukuba baphonononge ngexesha elifanelekileyo, kuyakwenza abameli bezentengiso ukuba etsala abantu abatsha.
tags: UhlalutyoabaphulaphulikublogaUBrian Downardumnxeba kwisenzoubiza isenzoimigudukhangela uluhluuluhlu lokuhlolaguqukakubloga kwequmrhuukuthembekaCRMctaukunyaniseka kwabathengiulawulo oludibene nabathengiuxhaso lwabathengiI-ELIV8email Marketingizixhobo zempendulourhwebo inboundUluhlu lokuthengisa olungena ngaphakathiukuguqulwa kwephepha lokufikamaphephaabathengi abathembekileyoukuzenzekela ngokuzenzekelayounikaiifom zokungenaNgokwezifisoReviewsumxholo ojolise kwintengisoSEOImidiya yokuncokolaubungqina boluntuZophandoUbungqina
Oktobha 28, 2015 ngo-1: 00 PM
Ndifuna nje ukubulela kwakhona ngokwabelana kunye namagama anobubele!
Oktobha 28, 2015 ngo-2: 05 PM
Konke kufanelekile, Brian!
Nov 5, 2015 kwi-4: 16 AM
Uya kuqaphela olu luhlu lokutshekisha. Thx kakhulu
Novemba 5, 2015 ngo-3: 14 PM
Jan 11, 2016 kwi-8: 29 AM
Olu luluhlu olukhulu lokuthengisa olwabiweyo.